လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်းကျော်သည်အထိ ဆေးလ်ဗားကို ဂွါဒီယိုလာရှိစေလို - Yangon Media Group
လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်းကျော်သည်အထိ ဆေးလ်ဗားကို ဂွါဒီယိုလာရှိစေလို
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာ က ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗားမှာ အသင်းနှင့် ၂ဝ၂ဝ အထိ စာချုပ်သက်တမ်းရှိထားသူ ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါစာချုပ် သက်တမ်းကျော်လွန်သည့်တိုင် ဆေးလ်ဗားကိုဆက်ရှိစေလိုသည် ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၃၃နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော ဆေးလ်ဗားသည် ၂ဝ၁ဝခုနှစ်က တည်းက ဗလင်စီယာမှ မန်စီးတီး သို့ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယား လိဂ်သုံးကြိမ်၊ အက်ဖ်အေတစ် ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အရေးပါသောကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်နေသည်။
ဂွါဒီယိုလာက ”ဒီလိုကိစ္စမျိုး မှာ ကစားသမားအပေါ်ပဲ မူတည် ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု လည်းပြည့်ဝနေမယ်၊ ဒီရာသီက ခြေစွမ်းအတိုင်း ဆက်ကစားနိုင်ဦး မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့က ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာထက်တောင် ပိုသေးပြီး ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို ရှာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အသက်အရွယ်မျိုးမှာ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်အသိဆုံးမို့ အသင်းနဲ့သက် တမ်းတိုးဖို့ဆိုတာ သူ့အပေါ်ပဲမူ တည်ပါတယ်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ ဇွန် ၁ ရက် စတင်စာရင
Fantastic Beasts3ရုပ်ရှင် အတွက် ဇာတ်ညွှန်း စတင်ရေးသားနေသော ဂျေကေရိုးလင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နုတ်ထွက်ပေးရန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် လူအချို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
သံဇစ်မြစ်အတွင်း သံချေးရောင် ပြောင်းနေသည့် ရေတွင် အောက်ဆီဂျင် ပျော်ဝင်မှု နည်းပါးဟု ရခိုင်ြ??
မြန်မာနိုင်ငံ လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများအသင်းချုပ် (MLCA) မှ ဆောက်လုပ်ထားသော တိုက်ခန်းများကို ??